Editor सम्पादकीय समाचारहरू बर्षको चौथो महिनाको लागि वर्तमान साहित्य
Editor सम्पादकीय समाचारहरू बर्षको चौथो महिनाको लागि
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | मा अद्यावधिक गरियो 03/09/2018 19:32 | युवा साहित्य, नोभेला, कालो उपन्यास
प्रत्येक महिना जस्तै, अप्रिलमा तिनीहरू आइपुग्छन् सम्पादकीय समाचार पुस्तक पसलमा। त्यहाँ धेरै छन्, तर म यी चार एकदमै विषम लेखकहरूलाई हाइलाइट गर्दछु मारिया दूडियास, मारिया ओरुआ, निलो जीन्स र आर्टुरो पेरेज-रिभर्टे। तर त्यहाँ अझ धेरै नामहरू छन् जुन नयाँ शीर्षकहरू प्रस्तुत गर्दछन्। त्यस क्षणको लागि म यी चार कथाहरूसँग बस्छु जुन तिनीहरूको शैली भित्र उनीहरूका धेरै पाठकहरूको लागि नयाँ भावनाहरूको वाचा गर्दछ र सर्वश्रेष्ठ विक्रेता बन्छ।
1 क्याप्टेनका छोरीहरू - मारिया दूडियास
2 जहाँ हामी अजेय थियो - मारिया Oruña
3 अदृश्य केटी - निलो जीन्स
4 कठिन कुकुरहरू नाच्दैनन् - आर्टुरो पेरेज-रिभर्टे
5 थप समाचार
क्याप्टेनका छोरीहरू - मारिया डाउडेस
ला मानचा मारिया ड्यूडासका लेखक यस नयाँ शीर्षकको साथ उनको क्षेत्राधिकारमा फर्किन्छन् जुन निस्सन्देह उनको हजारौं अनुयायीहरूलाई खुशी पार्नेछ। एक नयाँ हुन उत्सुक उत्कृष्ट विक्रेता, तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामी पाठकहरूले यस कथाको सेट इनको बारेमा के भन्छौं हेर्नेछौं १ 1936। New मा न्यू योर्क.
त्यहाँ सानो खान घर भनिन्छ कप्तान यो Calle Catorce मा संचालन गर्न थाल्छ, स्पेनको उपनिवेशको एक स्थान जुन त्यस समयमा शहरमा बस्थ्यो। तर यसको मालिकको दुर्घटनात्मक मृत्यु, एमिलियो एरेनास, आफ्ना बीसौं वर्षमा छोरीहरूलाई व्यवसायको हेरचाह गर्न बाध्य पार्दछ। अदालतहरूमा एकै साथ एक भरपर्दो क्षतिपूर्ति संकलनको समाधान हुन्छ। जे होस्, तिनीहरू निराश महसुस गर्दछन् र बाँच्न कोसिस गर्छन्, र यस्तै। धेरै स्वभाविक भिक्टोरिया, मोना र लुज एरेनास तिनीहरूले गगनचुम्बी भवन शहर र देशवासी, कष्ट र प्रेम बीचमा आफ्नो बाटो बनाउन कोशिस गर्नेछन्।
जहाँ हामी अजेय थियौं - मारिया Oruña
Vigo बाट मारिया Oruña द्वारा नयाँ उपन्यास। क्यान्टाब्रियन बुबासँग उनी बारम्बार त्यो भूमि पनि जान्छन्, जहाँ उनले पहिले नै आफ्ना पुराना शीर्षकहरू सेट गरेका छन् जाने ठाउँ y लुकेको पोर्ट। यो कालो विधामा उनको धेरै सफल डेब्यू थियो। दुबै उपन्यासहरूमा मुख्य पात्रहरू क्यान्टाब्रियन परिदृश्य र लेफ्टिनेन्ट भ्यालेन्टिना रेन्डोको टोली हुन्, जुन पनि यस कथामा स्टारमा फर्कन्छ।
हामी ग्रीष्मको अन्त्य गर्दैछौं अन्तमा र लेफ्टिनेन्ट रेडन्डो सक्षम हुन अगाडि हेर्दै छन् बिदा लिनुहोस्। तपाईं सक्षम हुनुहुने छैन, किनभने तटीय शहरको बीचमा नै स्वास्थ्य पुरानो महलको मास्टरको माली, एक रहस्यमय ठाउँ, लनमा मृत भेटियो।
दरबार आसपासको सबैभन्दा ऐतिहासिक हवेलीहरू मध्ये एक हो, र लामो समय निर्जन पछि, अमेरिकी लेखक कार्लोस ग्रीनउसको उत्तराधिकारी अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने ठाउँमा बस्यो जहाँ ऊ बसेको थियो उसको जवानीको उत्तम ग्रीष्म .तु। अपराधको सामना गर्नुपर्दा, उनी स्वीकार गर्दछन् कि हालैका दिनहरूमा उसले अकल्पनीय पूर्वाग्रहहरू बुझेका थिए।
भ्यालेन्टिना विषयको बारेमा शंकास्पद छ, तर उनी दुबै र उनको टोली, र उनको पार्टनर, ओलिभर, आफूलाई केही असामान्य घटनाहरूमा संलग्न भेट्टाउँछन्। उनीहरूले पत्ता लगाउँनेछन् कि केहि स्थानहरूले धेरै गोप्य राख्दछन् र ती सबै पात्रहरूमा केहि बताउन र लुकाउन केहि छ।
अदृश्य केटी - नीलो जिन्स
El मातृभूमि युवा रोमान्स उपन्यासका राजा यो पहिले नै भएको धेरैको umpteenth शीर्षक प्रकाशित गर्दछ। यस पटक उसले कथामा कालो स्पर्श दिन्छ अरोरा रियोस, सत्रह वर्षीया किशोरी, उनी लगभग सबैलाई अदृश्य महसुस गर्छिन्।
विगतका घटनाहरूले उनलाई घरमै सीमित गरिसकेकी छिन् र उनी दुवैले कतै कसैसँग अन्तरक्रिया गरे। उनको कुनै साथी छैन र उनी पछाडि पछाडि कुरा गरीरहेको सहरका बासिन्दाहरूसँग थकित छन्। मेमा एक रात उनकी आमा कामबाट घर आउँछिन् र उनलाई घरमा भेट्टाउन सक्दिनन्, यो सामान्य कुरा हो। तर अर्को दिन अरोरा मरेको देखिन्छ उनको संस्थानको परिवर्तन कोठामा। उसले टाउकोमा चोट पुर्‍याउँछ र उसको शरीरको छेउमा कसैले कम्पास छोड्दछ। को जिम्मेवार हुन सक्छ?
जुलिया प्लाजा, अरोराको साथी तपाईं आफैले जवाफ खोज्ने प्रयास गर्ने निर्णय गर्नुभयो। धेरै छ बुद्धिमान र एक विचित्र स्मृति छ। तर ऊरोराका अभिभावकलाई सहयोग गर्न सक्छ? उनको आमा आइताना यस मुद्दाका सहकर्मी हुन् र उनको बुबा, मिगेल एन्जल, सिभिल गार्ड न्यायिक पुलिस सेर्जेन्ट अनुसन्धानका प्रभारी थिए। त्यसैले सँगै उनको अविभाज्य मित्र Emilio, एक धेरै विशेष केटा, जुलिया संग खोजी गर्न कोशिस गर्नेछ जसले अरोरा रियोसको हत्या गरेको छ।
कठिन कुकुरहरु नाच गर्दैनन् - आर्टुरो पेरेज-रिभर्टे
अन्तिम पतन कार्टेजेना लेखक प्रस्तुत ईवा, आफ्नो जासूस को बारे मा श्रृंखला मा दोस्रो शीर्षक लोरेन्जो फाल्का। र केहि महिना पछि, उनी अप्रिल on मा प्रकाशित भएको यो नयाँ उपन्याससँग आश्चर्यचकित छन्। प्रस्तुत गर्न उनको आकर्षक र घातक Falcó को सफल कारनामों मा एक कट पहिलो व्यक्तिमा भनिएको कथा कुकुर द्वारा कालो, चार खुट्टे एलाट्रिस्टे, हामीलाई उनको जीवन बिच बताउनुहोस्, र कहिल्यै राम्रो भनेको छैन, स्पष्ट, स्पष्ट, जोडदार र गहिरो भावनात्मक टोनको साथ जुन प्रायः पेरेज-रिभर्टेको हो।
शुरुआतले पहिले नै यस्तो प्रतिज्ञा गरेको छ: «म एक मेस्तिजो, एक स्पेनिश मास्टिफ र ब्राजिलियन प row्क्ति बीचको क्रसको जन्म भएको हुँ। जब म पपी थिएँ नवजात कुकुरहरूका लागि मसँग ती प्यारा र हास्यास्पद नामहरू थिए, तर यसबाट धेरै समय बित्यो। म बिर्सिएको छु सबैजनाले मलाई लामो समयदेखि निग्रो भनिरहेका छन्। मैले पहिलो अध्याय पढिसकें र फल्काको श्रृंखलासँग धेरै कुरा नगरी यस कथाले गर्दछ मेरो ध्यान प्राप्त गर्न को लागी प्रबंधित छहुनसक्छ किनभने म कुकुर प्रेमी हुँ र म कडा कथाहरू र पुरुष पहिलो व्यक्ति कथाकारहरू मन पराउँछु। म आशा गर्दछु कि म मेरो पूर्वानुमानमा गलत छैन।
हामी नेग्रोलाई भेट्छौं मार्गोटको कुंड, जहाँ छिमेकको पोचेस भेला हुन्छ, र हामीले त्यसलाई भेट्यौं Teo र Boris el Guapo को बारे मा केहि पनि थाहा छैन। तपाईका सहकर्मीहरूले त्यस्तो महसुस गर्छन् उसको बेपत्ता हुनुमा केहि अन्धकार छ। तिनीहरू सबैले यो शंका गर्छन् र निग्रोलाई यो थाहा छ। नेग्रो एक थोरै सेनानी हुन् र उनको थोरैमा उसको दागहरू छन् र एक बक्सरले जस्तै उसले आफूलाई प्रशंसकको रूपमा केहि परिभाषित गर्छ। तर साथीहरू साथीहरू हुन् र सबै भन्दा कठिन परिस्थितिमा लड्ने र बाँच्ने प्रवृत्तिले उसलाई पछिल्लो खोजीमा खतरनाक यात्रा गर्न उक्साउँछ। भाग्यले के ल्याउनेछ हामी हेर्नेछौं।
Macbeth, जो Nesbø द्वारा.
माटोमा लिंकन, जर्ज Saunders द्वारा।
Firmament, म्याक्सिम Huerta द्वारा।
मेरो पाप, जेभियर मोरो द्वारा.
विश्वासघातको बतास, क्रिस्टीन मंगान द्वारा.
बोक्सी लिओपोल्डिना र अन्य साँचो कथाहरू, मिगुएल डेलीबेस द्वारा.
ल्याभेन्डर को स्मृति, रेस मोन्फोर्टे द्वारा गोल।
पानीको मोती, लोला पी Nieva द्वारा जब हामीसँग जानकारी छ।
हामी गीतहरू थियौं, एलिसाबेट बेनाभेन्टले रन बनाए।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » Editor सम्पादकीय समाचारहरू बर्षको चौथो महिनाको लागि